Yaa ka taliya Soomaaliya? | Anti-Tribalism
← Qaar ka mid ah Ergadii ka qayb Galaysey Shirka Garoowe Labaad oo Maanta Shirka Isaga baxay
Maamulka Galmudug State oo kabaxay madasha shirka garowe iyo murano dhashey ( Wararkii ugu danbeyey)+ sawiro →
Soomaaliya sida loo kala haysto
Somaliland – Waa Jamhuriyad gooni isu taagtay 1991. Waxay ka kooban tahay 5 ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya ay ahayd burburka ka hor. Inta badan degaankaas si buuxda ayay gacanta ugu heysaa dowladdu. Waa gobollada Soomaaliya kuwa ugu xasilloon, isla markaana ugu horumar iyo maamul waxaangsan. Golaha degaanka, Baarlamaanka iyo Madaxweynaha intaba shacabka ayaa toos u soo doorta. Dhaqaaluhu wuxuu xoog ugu tiirsan yahay dekedda Berbera.
Puntland – Waa maamul goboleed ku salaysan beel deggan dhowr gobo looBari, Nugaal iyo Mudug ay ka mid yihiin. Waxaa u xarun ah Garowe. Waa degaanka xagga nabadda iyo maamulkaba ku soo xigaSomaliland. Gole la soo xulay ayaa doorta Madaxweynaha. Waxaa ka socda horumar ay k mid tahay in shidaal laga baarayo. Dekedda Boosaaso waa il dhaqaale oo aad muhiim ugu ah Puntland.
Galmudug – Sida magaceeda ka muuqata waxaa loogu tala galay in ay ka taliso ugu yaran labada Gobol ee Mudug iyo Galguduud. Hadda waxay ku kooban tahay degaanno Mudug ka tirsan. Waxaa u xarun ah Gaalkacyo.
Ximan iyo Xeeb – Waa qeyb kale oo ka mid ah Galguduud. Caalamku uma aqoonsana maamul goboleed lagamana qeyb geliyo shirarka siyaasadda. Xarunteedu waa Cadaado.
AHSW – (Ahlu Sunna wal Jameeca) -Waa koox suufiyiin ah oo la dagaasha al Shabab. Waa malliishiyo ka kooban dhowr qabiil. Inta badan waxay ka hawl galaan Galguduud. Laakiin waxaa kale oo ay ku sugan yihiin Gedo iyo Muqdisho iyo gobollo kale. Shirka London waxaa uga qeyb gelaya wafdi.
Muqdisho – Waa caasimadda dalka. Waxaa deggan dowladda Federaalka madaxdeeda iyo hey’adaheeda. Ammaanka waxaa gacanta ku haya ciidanka Afrika ee AMISOM oo ka socda dalalkaUganda,BurundiiyoDjibouti. Waxay kaashadaan ciidanka Soomaalida. Waxay rajo ka qabaan inBritainay Qaramada Midoobay marsiiso in la kordhiyo ciidanka oo sida Afrika ay codsatay la gaarsiiyo 17,000. Waxaa kale oo AMISOM ay rajo ka qabtaa in la sameeyo sanduuq aan gureyn oo ay ku jirto lacagta ay ku shaqeeyaan.
Jubbooyinka – CiidankaKenyaoo dhul, bad iyo cirba ka dagaallamaya ayaa Shabaab ka yara fogeeyay soohdintaKenya. Weli magaalooyinka waaweynkamaaanay qabsan.Britainhore ayay u taageertay hawlgalka militeri eeKenya.
Gedo iyo Bakool – Ahlu Sunna iyo ciidanka Ethiopiaoo iskaashanaya ayaa soohdintaEthiopiaka fogeeyay al Shabaab. Waxaa loo dheg taagayaa waa dagaallo hor leh oo ka dillaaca degaanka Bay.
Hiiraan – Ciidanka Ethiopiaoo kaashanaya ciidanka Dooxada Shabeelle ayaa Beled Weyne iyo Degmada Jawiil ka saaray al Shabaab. Degmada Mataban oo ka tirsan Hiiraan iyada hore ayaa Shabaab looga saaray. Magaalooyinka kale ee Hiiraan, waa Buulo Burte, Jalalaqsi iyo Maxaas waxay gacanta ugu jiraan al Shabaab.
Al Shabaab – Gobollo badan ayay Shabab qaarkoodna dhamman gacanta ku haysaa, qaarna ay gobo ka mid ah ku sugan tahay. Waxaa ka mid ah, Jubbada Hoose oo ay dekeddeeda Kismaayo ay aad ugu tiirsan tahay. Waxaa kale oo ay ku sugan tahay Jubbada Dhexe, Gedo, Bay, Bakool, Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo Galguduud.